Ady amin’ny pesta : fitaovana maro avy amin’ny governemanta japoney | NewsMada
Ady amin’ny pesta : fitaovana maro avy amin’ny governemanta japoney
Nanolotra ireo fitaovana entina ampiasaina hamongorana ny valanaretina pesta, tetsy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka etsy Ambohidahy ny governemanta japoney amin’ny alalan’ny masoivohony, Ichiro Ogasawara sy ny solontenan’ny Jica, Hironobu Murakami omaly.
Natolony tamin’izany ireo tapim-bava miisa 30.720, fampiasa amin’ny toerana hikarakarana ny mararin’ny pesta. Teo koa ny fitaovana fitsapana hafanana miisa 400 ary lamba firakotra 200 ho an’ireo marary.
Nanambara ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Andriamanarivo Lalatiana fa hampiasaina amin’ireo hopitaly mikarakara ny mararin’ny pesta ireo fitaovana ireo. Ampiasain’ireo mpiasan’ny fahasalamana manao fanaraha-maso ny fianakavian’ny marary eny amin’ny fokontany ihany koa izany.
Nanantitrantitra ny firahalahiana eo amin’ny firenena roa tonta ny masoivoho japoney. Nankasitraka ny fanjakana malagasy ihany koa izy amin’ny ezaka natao sy mbola hatao hiadiana amin’ity valanaretina ity.